I-Semalt Ingcali Kwiingcebiso zoShishino lwe-Twitter Ukuphucula umkhankaso wakho wokuthengisa
Akuyi kuphazamiseka ukuthetha ukuba i-Twitter yenye yezona zixhobo ezithandwa kakhulu kunye ezimangalisayo kubantu abashishini ukuba bakhulise ubukho babo kwi-intanethi. Inceda ukuba bakhe iiwebhusayithi kunye nokwandisa intsebenziswano yabo yabasebenzisi ngokubanzi.
Nangona kukho iingcebiso ezahlukeneyo ze-Twitter, ezi zilandelayo zivela kuFrank Abagnale, ingcali ehamba phambili iSemalt , inxulumene nokuthengiswa kwentlalo ephumelelayo kwaye ngokuqinisekileyo iya kukunika amaninzi amanzuzo.
Nokwandisa iBusiness Business yakho kwi-Twitter
Kuye kubalulekile kubo bonke oomashishini ukuba balungiselele umsebenzi wabo kwi-Twitter. Kufuneka wenze iintengiso ze-Twitter kwaye wenze njengobungcali ukuba ufuna ukuhlala uphila kwi-intanethi. Ukubhenca kuthetha ukuba uza kufuneka ungeze uphawu lwegama lomntu kwiprofayili yakho ye-Twitter. Ngexesha, liye laba yinto ebalulekileyo, kwaye ukusinda kweshishini kuxhomekeke kwindlela i-brand yakho evezwa ngayo kwi-intanethi. Iyonke inkqubo iqala nge-bio eyiyo. Ewe, kufuneka ubhale i-bio emihle kunye neenhlamvu ezili-160 kwiprofayili yakho ye-Twitter ukuba unzulu ngokuphathelele ukwenza nokuqhuba ibhizinisi lakho kwi-intanethi.
Yakha isicwangciso sakho sokuqukethwe
Unyanzelekile ukuba uthathe ixesha kwaye udale izicwangciso ze-Twitter. Unako ukuseka ishishini lakho ukuba uyayinyamekela izikhokelo zeendaba zentlalo kwaye uvumele umxholo wakho ube nolwazi lokudala kunye nokubandakanya..Konke oku kuya kwenzeka kuphela xa wakha isicwangciso sakho somxholo. Kufuneka udale umxholo onomsebenzisi kunye nalowo uthetha nge shishini lakho ngendlela engcono. Khetha izihloko eziphathekayo kunye namagama akwii-key-oriented industries ukutsala inani elikhulu labantu. Ngaphezulu, kufuneka ugxile ekunikezeni ixabiso kubaphulaphuli bakho. Kuyimfuneko kubo bonke abasebenzisi be-Twitter kunye nabo benza ibhizinisi.
Kumele usebenzise ama-hashtag ukuze wandise ubungakanani bomxholo wakho. Phantse bonke abasebenzisi be-Twitter basebenzise ama-hashtag ukuze badibaniswe nabantu abachaphazelekayo kwaye basebenzisane nabaninzi bangaphandle. Kufuneka ukhethe ama-hashtag ngokusekelwe kubaphulaphuli bakho kunye nesimo sewebhu. Ama-hashtag amaninzi owafakelayo, bhetele kuya kuba yimiphumo kwi-Twitter.
Khula kwaye ubenze Abalandeli bakho
Ukuthengwa kweendaba zoluntu kubonwa ngempumelelo kuphela xa usakhulile kwaye wabandakanyeka abalandeli bakho inyanga emva kweenyanga. Qinisekisa ukuba abalandeli bakho be-Twitter abavumi okanye bakhathele njengoko bengakulandeli ngokukhawuleza. Kufanele ukhuthaze abanye ukuba banxibelelane nawe kwaye babandakanye wonke umntu kwiintlobo zeengxoxo zonke iintsuku. Oko kuza kukunyusa inani lakho labalandeli be-Twitter kunye nezoshishino zakho ezininzi.
Ukulinganisa iziphumo zakho nokucwangcisa imizamo yakho
Ekugqibeleni kodwa kungeyona encinci, kufuneka ulinganise iziphumo zakho kwaye ulungise imizamo kanye ngeveki. Ngenxa yoko, ungasebenzisa izixhobo ze-Twitter ezifana neTrtrland, iTwitalyzer, kunye neTweetReach. Zonke ezi zixhobo zenza kube lula kuwe ukulinganisa imizamo yakho yokuthengisa nge-Twitter. Ngokusekelwe kwiziphumo, unokwenza iingxelo uze ubone ukuba zeziphi izicwangciso eziye zalungile ukuchithwa kwebhizinisi lakho. Yenza ezo zicwangciso zibe yingxenye yezoshishino lakho kwaye uzilahleke abo bazinikezele ngezoshishino lakho.